Sabotsy 06 Jolay 2019. – FJKM
Sabotsy 06 Jolay 2019.
Fandalinana ny ASAN’NY APOSTOLY
Asan’ny Apostoly 28.17-31
Tonga soamatsara tany Roma ry Paoly . Inona no nataony rehefa tonga tany ?
1-Nanao tatitra ny anton-diany tamin’ny Jiosy i Paoly (and17-22)
Na dia ny Jiosy aza no nisambotra sy nanolotra an’i Paoly tamin’ny fitsarana , dia tsy nisalasala izy hihaona amin’ny Jiosy tahaka azy tany Roma . Izy no nanao dingana voalohany amin’ny fifandraisana . Fianarana ho antsika izao nataon’iPaoly izao.
2-Nitory an’i Jesoa sy ny fanjakan’ Andriamanitra tamin’ny Jiosy i Paoly (and23.30-31)
Nampianatra momba ny fanjakan’ Andriamanitra i Paoly. Nandresy lahatra ny Jiosy izy mba hino an’iJesoa Kristy. Tamin’ny alalan’ny teny avy ao amin’ny lalàn’i Mosesy sy ny mpaminany no nentiny nandresy lahatra azy.
3-Nilaza ny anton’ny tsy finoan’ny Jiosy sasany i Paoly ( and24-31 )
Nizara roa ny olona nihaino an’i Paoly , ny sasany nino , ny sasany tsy nino (and24) . Hazavainy amin’ny hevitra roa ny anton’ny tsy finoan’ny sasany . Efa nambaran’ny Fanahy Masina , fa izany mihitsy ireo olona ireo , tsy mety mino na inona na inona no atao (and25-27) . Nambarany koa fa ny mba hitodihan’ny famonjena mankany amin’ny Jentilisa no antony (and28) . Tsy misy mahasakana ny fitoriana ny Filazantsara na dia ny tsy finoan’ny olona aza ( and 31).
« Raiso ny Tenin’ Andriamanitra » Boky faha-8
Zoma 14 Oktobra 2016
Talata 12 Novambra 2019.
Ivony faha-200T Sekoly
Alatsinainy 11 Novambra 2019.
Alahady 10 Novambra 2019.
Sabotsy 09 Novambra 2019.
Alakamisy 07 Novambra 2019.
Zoma 08 Novambra 2019.
Alarobia 06 Novambra 2019.
TORITENY : EKSODOSY 12.15-17